[Igumbi lokushona kwelanga elicwebezelayo] Umugqa wokuqala wokubukwa kolwandle·Ithiyetha yasekhaya · Ulwandle lapho ushiya umphakathi/Ulandwa mahhala noma ulibeke ubusuku obuthathu/Ukulanda mahhala nokwehliswa ubusuku obuhlanu/Ingapheka - I-Airbnb
[Igumbi lokushona kwelanga elicwebezelayo] Umugqa wokuqala wokubukwa kolwandle·Ithiyetha yasekhaya · Ulwandle lapho ushiya umphakathi/Ulandwa mahhala noma ulibeke ubusuku obuthathu/Ukulanda mahhala nokwehliswa ubusuku obuhlanu/Ingapheka
I-ifulethi ephelele ibungazwe ngu-存夏
U-存夏 Ungumbungazi ovelele
-Ifulethi lokubukwa kolwandle olukhulu, elibheke ulwandle nolwandle, akukhululekile
-Itholakala eSanya Bay, phakathi nebanga lokuhamba leCoconut Dream Corridor, ulwandle lungaphandle nje komphakathi.
-Cishe amamitha-skwele angama-60 igumbi elilodwa lokulala elinendawo yokuphumula evulekile
-Tmall Genie projektha, jabulela isipiliyoni sokubuka esifana nesinema
-Izindawo zokulala ziyashintshwa futhi zihlanzwe yisivakashi ngasinye, futhi kukhona o-anti abagcwele abahlanza igumbi
-Umphakathi unamachibi okubhukuda, izindawo zokupaka nezitolo ezinkulu, okwenza impilo ibe lula.
-Ifulethi lisendaweni ephambili ye-Sanya Bay, ulwandle lungaphandle nje komphakathi, ukuntweza nokudlala, kuthule endaweni efanayo, futhi ujabulele isikhathi sokungcebeleka.
-Kusihlwa, ungabona nokushona kwelanga okuhle kuvulandi, umuzwa ofana nehhotela lezinkanyezi ezinhlanu
-Tmall Genie high-definition projektha, ifakwe umsindo wokuthungwa, ikulethela umuzwa omusha womsindo nokubukwayo
-100% amakhethini amnyama amnyama, nquma lapho uvuka ~
-Igumbi libuye lifakwe umoya, umshini wokuwasha, isiqandisi, isifudumezi samanzi samahora angama-24, iziliphu, amathawula okugeza, ijeli yokugeza, ishampoo, isomisi sezinwele, ukupompa amaphepha, njll.
-Ikhishi lingasetshenziselwa ukupheka, futhi kukhona izitsha ezinjengamabhodwe nezitsha kanye nama-induction cookers, ukuze ukwazi ukudla ukudla kwasolwandle ekhaya.
Leli fulethi litholakala eSanya Bay, Coconut Dream Corridor, ulwandle uma uphuma emphakathini.Umphakathi uhlome ngamachibi okubhukuda, izindawo zokupaka kanye nezitolo ezinkulu.Impilo ilula.
I-balcony enkulu enokukhanya okuhle, ungabona ukubuka kolwandle kusuka kuvulandi
Emini, ungajabulela umoya ohelezayo wasolwandle futhi ubuke ukubuka kolwandle, futhi ebusuku, ungajabulela isidlo sakusihlwa sokukhanyisa amakhandlela kuvulandi, okuwuthando oludlulele.
Uma unokuthile ngesikhathi sokuhlala kwakho, ungathinta umgcini wendlu nganoma yisiphi isikhathi, futhi ifoni izovulwa amahora angama-24 ngosuku.
Bhuka ubusuku obungaphezu kobu-3 ukuze ujabulele ukulandwa mahhala noma isipho
Jabulela isevisi yamahhala yokulandwa kanye nokushiya esikhumulweni sezindiza ngokubhukha okungaphezu kobusuku obungu-5
Ufanelwe okungcono kakhulu
Bhuka ubusuku obungaphezu kob…
U存夏 Ungumbungazi ovelele